UN: Dhimashada Ciraaq oo dhaaftay 1000 - BBC News Somali
Ugu yaraan 1,075 qof oo u badan dad rayid ah ayaa lagu dilay dalka Ciraaq bishan Juun gudaheeda, sidaasi waxa sheegay korjoogayaasha Qaramada midoobe.
Warbixin ay soo saartay kooxda xuquuqda aadanaha ee Qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in 757 dadkaasi ka mid ah lagu dilay govbollada Nineveh, Diyala iyo Salahuddin intii u dhaxeysay 5-ta bisha Juun ilaa 22-ka.
Waxay intaasi ku dartay warbixintu in 318 qof oo kale lagu dilay magaalada Baqdaad iyo degaanada koonfurta Ciraaq.
Afhayeenka Qaramada midoobe Rupert Colville ayaa sheegay in tirada ay ku jirto dad shacab ah la toogtay iyo boolis iyo ciidan diiday in ay dagaalamaan oo iyaguna la toogtay.
Dagaalo aya dib uga soo cusboonaaday Ciraaq kaddib markii kooxo suniyiin ah ay kacdoon ka bilaabeen waqooyiga dalka Ciraaq, waxayna la wareegeen dhul ballaaran oo ay ku jirto caasimada labaad ee Musul.